यस्तो छ भिटामिन ‘बी’ को कमीबाट हुने समस्या ! - Everest Dainik - News from Nepal
यस्तो छ भिटामिन ‘बी’ को कमीबाट हुने समस्या !
हामीले दैनिक खाने खानामा भिटामिन ‘बी’ हुनु अति आवश्यक छ । भिटामिन ‘बी’ पानीमा घुलनशील भिटामिन हो । यसको कमीबाट शरीरमा अनेक रोग लाग्छन् । अनुसन्धानकर्ताहरुले भिटामिन ‘बी’का थुप्रै प्रकारको खोजी गरिसकेका छन् । सबैलाई मिलाएर भिटामिन बीकम्प्लेक्स भनिन्छ । यी सबै एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् ।
भिटामिन ‘बी’ को कमी भएमा स्मरणशक्ति कमजोर हुनुका साथै थकान महसुस हुने र डिप्रेसन पनि हुन सक्छ । स्वस्थ रहन तथा शरीलाई सुचारु गर्न भिटामिन र सूक्ष्म पोषणको जरुरी हुन्छ । भिटामिन ‘बी’ कम्प्लेक्सले शरीरमा मेटाबोलिज्म बढाउँछ । मेटाबोलिज्मले पोषक तत्वलाई शक्तिमा बदल्ने काम गर्छ । यसले डिएनए बनाउन पनि सहयोग गर्छ । राता रक्त कोष निर्माण पनि भिटामिन ‘बी’ कम्प्लेक्सले गर्छ । यसले शरीरका विभिन्न भागका लागि प्रोटिन बनाउने काम पनि गर्छ ।
कमी भए के हुन्छ ?
हात–खुट्टा झमझम गर्ने, पोल्ने
स्मरण शक्ति ह्रास हुने
कमजोरी महसुस हुने
निद्रा कम पर्ने
शरीरमा राता टाटा देखापर्ने
पाचन प्रक्रियामा समस्या आउने
आँखा कमजोर हुने
भिटामिन बी कम्प्लेक्सको स्रोत
मासु तथा दुग्ध जन्य पदार्थ
जमिनभित्र फल्ने फल–आलु, गाँजर, मुला, सलगम, तरुल आदि
गोलभेंडा, गहुँको पिठो, हरियो साग, बदाम, ओखर, पालिस नगरिएको चामल, सुपारी, अंगुर, हरियो केराउ, दाल, मेवा, नरिवल, पेस्ता, दही, बन्दाकोभी, माछा, अण्डाको सेतो भाग आदि ।
भिटामिन ‘बी’का बहुरुप
भिटामिन बीबिभिन्न रुपमा पाइन्छ । बी १, बी २, बी ३ र बी १६ ।
यी चार तत्वको सम्मिलित रुप नै भिटामिन ‘बी’ कम्प्लेक्स हो । भिटामिन ‘बी’ को पहिलो सदस्य ‘थाइमिन’हो । त्यसैले यसलाई बी १ भनिन्छ । यसले स्नायु र पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्छ । रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ । बी १ को कमी भएमा भोक नलाग्ने, कमजोर हुने हुन्छ । यसको कमीले मानसिक समस्या पनि हुन्छ । यो चामल, गहुँ, जौं, भटमास, केराउ, बदाम आदिमा पाइन्छ ।
भिटामिन बी २ लाई ‘राइबो फ्लोबिन’पनि भनिन्छ । यो मुख र आँखाका लागि आवश्यक हुन्छ । यसको कमीले जिब्रो रातो हुने, मुखको छाला निस्कने, आँखा कमजोर हुने, जिब्रोमा घाउ आउने जस्ता समस्या देखिन्छ । बी २ यो दूध, दही, विभिन्न अनाज, हरियो सागसब्जीमा पाइन्छ ।
भिटामिन बी ६ लाई ‘पाइरीडाक्सिन’ भनिन्छ । यो छालाका लागि आवश्यक हुन्छ । यो अनाज, दूध, कलेजो, मासु आदीमा पाइन्छ ।
भिटामिन बी १२ को रासायनिक नाम ‘सायनोकाबालामीन’हो । यो छाला, हड्डी, कोशिका तथा मांसपेशीका लागि आवश्यक हुन्छ । यो मासु, माछा, अण्डा आदिमा पाइन्छ । भिटामिन बी कम्प्लेक्समा नाइकोटोनिक एसिड, बायोटिन, प्यान्टोथेनिक एसिड र फोलिक एसिड पनि पाइन्छ । यसलाई स्थायी भिटामिन भनिन्छ ।
मासुलाई ४५ मिनेट उमाल्दा पनि करिब ७० प्रतिशत भिटामिन सुरक्षितरुपमा बच्छ । गाईको दूधलाई २ देखि ५ मिनेटसम्म उमाल्दा पनि २५ देखि ३० प्रतिशतमात्र नष्ट हुन्छ । यसले ऊर्जा र क्षमता बढाउँछ भने मस्तिष्कलाई स्वस्थ राखी एकाग्रता बढाउँछ ।
यस्तै, भिटामिन बी १२ ले तनाव र अनिद्रा हटाउनुका साथै रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई पनि बढाउँछ । कोशिकाको विकास र मर्मतका लागि पनि यो जरुरी छ । एजेन्सीको सहयोगबाट
ट्याग्स: Vitamin B
अब सबैले कोरोना परीक्षण गर्न पाउने, कति लाग्छ शुल्क ?
सह–सचिवकाे नतिजा प्रकाशित, काे-काे भए पास ? (सूचीसहित)
किन चलेनन् सार्वजनिक यातायात ?
नेपाल प्रहरीका ६६ जना असई सईमा बढुवा (सूचीसहित)